ကိုကြီးစာ ဖတ်ပြီး လူတောင် ရှုပ်မဲ့မဲ့ ဖြစ်လာတယ်...
Jun 26, 2007, 10:27:00 PM
ယောက်ျားလုပ်တဲ့သူကို မွေးခန်းထဲခေါ်တဲ့ ကိစ္စကိုတော့ သဘောကျတယ်။ ဒါမှ မိန်းမတွေရဲ့ ဒုက္ခကိုသိမှာ။ ပြီးတော့ ကလေးကိုလည်း ပိုချစ်မယ်ထင်တယ်...
အစကတော့ ဖတ်ဖူးတဲ့ဟာသလေးရေးပြမလို့။ အခုတော့ မေမေ့ကို သတိရတာနဲ့ပဲ ဟာသလဲမရေးချင်တော့ပါဘူး။ မေမေလဲ ချိုကို့ကိုမွေးရတာ ခက်တာပဲ။ ည၄နာရီလောက်က ဗိုက်နာတာ နောက်နေ့ ညနေ၅နာရီခွဲမှ မွေးနိုင်တာ... အားမရှိတော့လို့ ညှပ်နဲ့ဆွဲမွေးခဲ့ရတာ... ဒီပို့စ်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါနော်
Jun 26, 2007, 10:40:00 PM
ဒီဟာလေး ဖတ်ပြီး မျက်ရည်ကျနေတဲ့ကိုကြီးကို ပိုစိတ်မကောင်းအောင် လုပ်ခဲ့မိတာတွက် ခွင့်လွှတ်နိုင်ပါစေလို့ စိတ်ထဲ ရေရွတ်လိုက်တယ် ။
Jun 26, 2007, 10:42:00 PM
အမလေး..ကိုယ်တိုင်၃ခါ နာခဲ့တာတောင် ခု ကိုစေးထူးစာဖတ်နေရသလောက် နာတယ်မထင်ဘူး။လူ့ကို မောသွားတာပဲ။ အင်းးး ဒါမဲ့..ဒီလိုသားမျိုးတွေ့တော့လဲ အမောပြေရပါတယ်။(အဟဲ)
တကယ်ပဲ သားသမီးတွေ အားလုံး အဲလို တွေးမိရင် ကောင်းမယ်နော်။
Jun 27, 2007, 1:00:00 AM
ကိုစေးကတော့ လုပ်လိုက်ပြီဗျာ. သားသား ၁၈ နှစ်ပြည့်သေးဘူးလေ။ ဒါတွေ ကြည့်လို့ မရသေးဘူး။ နောက် မြန်မာပြည်က ယောင်္ကျားလေးဆိုတော့ ဒါမျိုးတွေ မကြည့်ရဘူးလေ။ Tv မှာပဲ ကြည့်တယ်။ ကလေးမွေးတာ ကျွန်တော့ အမ မွေးတာကိုတော့ အပြင်ကနေ ထိုင်စောင့်ဖူးတယ် ။။ ယောက်္ဖကတော့ မွေးခန်းထဲ ၀င်လိုက်ထွက်လိုက်နှင့် မျက်ရည်တွေလည်း ထွက်လို့ . သူမကြည့်ရဲဘူးလို့ လဲ သူ့အမေကိုလာပြောရှာတယ် ။ကျွန်တော်ကတော့ တူလေးကိုပဲ မြင်ချင်နေတော့တယ်။ ကလေးကထွက်လာတော့ ခေါင်းလေးက ရှည်နေတယ်။ နောက်တော့ လုံးသွားမယ်လို့ အမကပြောတယ်။ ဆုပ်ခွက်နှင့် ခေါင်းကိုဆုပ်လိုက်လို့ ဖြစ်တာလို့ ပြောတယ်။ မချိုကို ကို ညှပ်နဲ့ဆိုတော့ ။ ဟီး ခေါင်းမရှည်ပဲ ..ဘယ်လိုပုံပေါက်နေမလဲ မသိ. ကျွန်တော်တူလေ မွေးမွေခြင်းဗီဒီယိုကိုမကြာခင် ဝေငှလိုက်ပါ့မယ်။
စာဖတ်ရင်း အမေ့ကို အရမ်းသတိရပါတယ်။ အမေနှင့် မတွေ့ရတာလဲ ကြာရောပေါ့..
Jun 27, 2007, 4:42:00 AM
ကိုစေးထူးရဲ့ ဒီပို့စ်အသစ်က တကယ်ကို ဖတ်လို့ကောင်းသလို တကယ်လည်း မျက်ရည်ကျမိပါတယ်။ အမေက ကျွန်မတို့မောင်နှမ ၃ ယောက်စလုံးကို ဗိုက်ခွဲမွေးခဲ့ရတာဆိုတော့ သူ့ပြောစကားနားမထောင်ရင် ဗိုက်ခွဲတာကို ပြပြီး ငါနင်တို့ကို ဘယ်လို ဒုက္ခခံပြီးမွေးခဲ့ရသလဲဆိုတာ ဒီမှာကြည့်ဆိုပြီး အမြဲပြပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီပို့စ်ကို တင်ပေးတဲ့ ကိုစေးထူးကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
Jun 27, 2007, 10:13:00 AM
ကိုကလိုစေးထူးရဲ့ ပို့စ်ကတော့ တကယ့်ကို မိဘမေတ္တာကို သိသိသာသာ မြင်စေပါတယ်ခင်ဗျာ..
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်မှာတော့ ရှားရှားပါးပါး မွေးခန်းထဲထိ ၀င်ပြီး မိန်းမကိုလည်း အားပေး ကိုယ့်ရဲ့ ပထမဆုံး သားဦးကိုလည်း အမိဝမ်းက ကျွတ်ကျွတ်ခြင်း ကြည့်ဖူးတဲ့ ဖခင်တွေထဲမှာတော့ ကျွန်တော်လည်း ပါပါတယ်ခင်ဗျ..
ဘာဖြစ်လို့ မွေးခန်းထဲ ၀င်တာလဲဆိုတော့ မိန်းမက အသက်နဲ့ရင်းပြီး ကိုယ့်သွေးသားကို မွေးနေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်က အပြင်ဘက် ထိုင်ခုံမှာ သက်တောင့်သက်သာ (အနည်းဆုံး လူတော့ မပင်ပန်းဘူးဗျာ။ စိတ်ကတော့ ပင်ပန်းမှာပေါ့လေ) ထိုင်မနေချင်လို့ပါ။
မိခင်တွေရဲ့ မေတ္တာကို ကိုယ်တိုင် မွေးခန်းထဲမှာ မြင်ဖူးမှလည်း ပိုပြီး ကိုယ်ချင်းစာတတ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ..
ကိုယ့်ရဲ့ ဇနီး ဘယ်လို အခက်အခဲထဲမှာ ပင်ပန်း ဆင်းရဲစွာ ရင်သွေးတွေကို မွေးထုတ်ရတယ်ဆိုတာ အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသား ဖခင်များ လက်တွေ့ သိမြင် ခံစားစေချင်တယ်ဗျာ..
အဲဒီအကြောင်း ရေးရင် ပို့စ်တစ်ခု ရေးလို့ရလောက်တယ်ခင်ဗျ..
အင်း.. ကိုယ်ပိုင် ကင်မရာမရှိတော့လည်း ဘယ်လိုမှ မှတ်တမ်း တင်မထားလိုက်နိုင်တာကိုတော့ ၀မ်းနည်းသလိုပဲဗျာ..
Jun 29, 2007, 11:38:00 AM